जनार्दन शर्मा जसले रुकुम नरसंहार लुकाउन खोजे तर, सफल भएनन् ! « Media for all across the globe
जनार्दन शर्मा जसले रुकुम नरसंहार लुकाउन खोजे तर, सफल भएनन् !
जनार्दन शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रका कामकाजी र लोकिप्रय नेता हुन्। उनका समर्थक नेकपा बाहिरको स्वतन्त्र युवा जमात पनि देखिन्छ। खासगरी शर्माले रुकुम जिल्लामा अपनाएको आधुनिक विकास योजना र उर्जा मन्त्री हुदाँ गरेका धेरै कामहरुले युवा पुस्ता माझ लोकप्रिय नै रहे। उनी नेकपा भित्र राम्रो प्रभाव राख्ने स्पष्ट बक्ता हुन्।
शर्मा पछिल्लो रुकुम घटनाले लोकप्रियताबाट ओरालो लागेका छन्। अन्तरजातीय विवाह गर्न रुकुम पुगेका नवराज सहित ६ जना युवाको सामुहिक हत्यालाई नेता शर्माले तोडमोड गरेर दोषीहरुलाई जोगाउन खोजेको आरोप लागेको छ। चौरजहानी – ८ सोतीका वडाध्यक्ष डम्बर मल्लको यो घटनामा मुख्य भुमिका अनुसन्धानले समेत देखाएको छ। मल्ल जनार्दन शर्मा निकट हुन्। आफु निकट भएकै कारण शर्मा दोषीको पक्षमा खुलेपछि उनको तिब्र आलोचना भएको हो।
जाजरकोटका नवराज साथीहरुसँग प्रेमिका भेट्न रुकुम चौरजहानी – ८ सोती पुगेका थिए। उनीहरु गाउँमा पुगेपछि वडाध्यक्ष मल्लको योजनामा कुटेर, ढुंगाले हानेर, हँसियाले काटेर क्रुरतापूर्वक हत्या गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ। तर, पूर्वगृहमन्त्री समेत भइसकेका शर्माले घटनापछि संसदमा बोल्दा बास्तविक घटनालाई तोडमोड गर्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। शर्माले रुकुम नरसंहार जस्तो गम्भीर र अमानवीय हिंसालाई लुकाउन त खोजे तर, सफल भएनन्।
जनार्दनले संसदमा गरेको सम्बोधन
– स्थानीय सरकारले घटनालाई अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
– त्यसछि युवतीकी आमाले गुहार मागेकी थिइन ।
– त्यतिबेलै वडाध्यक्षले प्रहरीलाई फोन गरेका ।
– रुकुममा यस्ता छुवाछुतका घटनामा राजनीतिकरण हुन सक्दैन ।
प्रहरीको अनुसन्धानबाट के पत्ता लाग्यो हेरौँ:
– स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि वडाध्यक्ष डम्बर मल्ल नै युवाहरुलाई हँसिंया र ढुंगाले हानेर कुटपिट गर्दै थिए ।
– युवतीकी आमाले गुहार नभई गाउँ टोलका अरुलाई पनि बोलाएर नवराजसहित केटाहरुलाई कुट्न गएकी थिइन ।
– वडाध्यक्षले प्रहरीलाई फोन गरे । तर गलत ठाउँ भनेर आफू युवाहरुलाई कुट्न र मार्न लागिरहे ।
– घटनालाई दबाउन शुरुदेखि नै नेकपाले हस्तक्षेप गरिरह्यो । चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो । जिल्लाका प्रतिनिधिका हैसियतले जनार्दनले आफ्ना कुरा संसदमा राखे, तर गलत सुचना र विवरण दिए ।